Chez Gangoueus: Bilaogy Mamiratra Momba Ny Literatiora Afrikana Amin’ny Teny Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 15:51 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Italiano, Français, македонски, Español, 简体中文, 繁體中文, English
(Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny volana Mey 2010)
Izay mamirapiratra tamin'ireo bilaogy mahavariana amin'ny teny 11 no mahazo ny Loka ho an'ny Bilaogy Tsara Indrindra taona 2010. Chez Gangoueus (amin'ny teny Frantsay) no mpandray anjara nahazo laharana faharoa tamin'ny loka Bilaogy Tsara Indrindra amin'ny teny Frantsay. Mibilaogy momba ny literatiora Afrikana sy ny am-pielezana amin'ny teny Frantsay i Réassi Ouabonzi nanomboka tamin'ny taona 2007, boky iray isaky ny fotoana no avoakany bilaogy. Mandeha ny fotoana, nanjary mpitari-dalana tokana antserasera momba ny literatiora mainty amin'ny teny Frantsay sy ho an'ireo mpanoratra Afrikana sy ny am-pielezana ny Chez Gangoueus.
GV : Nahoana ianao no nanokatra bilaogy momba ny boky?
Tia mamaky boky tanteraka aho fony tanora, namaky izay boky misy ao amin'ny foibe ara-kolontsaina Frantsay ao Brazzaville (Kongo), toerana nonenako. Teraka tao Frantsa aho ary Kongoley ny ray aman-dreniko, nandany ny 18 taonako tao amin'ny firenena tsirairay (Kongo, Frantsa) aho, ary monina ao Frantsa ankehitriny. Fandaniam-potoana ny famakiam-boky, tsy afaka namaky boky aho nandritra ny fianarako fizika. Avy eo, indray andro, nahita ny Beloved aho, horonantsarimihetsik'i Jonathan Demme mifototra amin'ny boky nosoratan'ilay Loka Nobel Toni Morrison. Nanintona ahy tanteraka izany ka tapa-kevitra hamaky ny bokiny rehetra aho. Nitondra ahy niverina hamaky boky izy.
Nahoana ianao no mifantoka amin'ny literatiora mainty amin'ny teny Frantsay?
Dingana fanahy iniana natao izany. Liana amin'ny famakiana boky momba ny fahitan'ny olona mainty hoditra ny tenan'izy ireo sy ny fanehoana azy ireo aho. Nanokatra bilaogy aho mba handrakitra ny vaki-bokiko, ary satria somary zava-misy mahery setra ny tsy fahitana loharanom-baovao momba ny Afrikana na ny literatiora mainty ao amin'ny tranonkala miteny Frantsay, ankoatra ny gazetiboky antserasera Cultures Sud.
“Les écailles du ciel (ny kiran'ny lanitra) “, Tierno Monenembo
Inona no zavatra malaza ankehitriny amin'ny literatiora Afrikana miteny Frantsay?
Mamaky ny sangan'asan'ireo mpanoratra avy amin'ny firenena Afrikana, Frantsay Andrefana (Karaiba) na ny am-pielezana, ny literatiora mainty amin'ny ankapobeny aho. Saingy avelao aho hieritreritra: ao Congo, mirongatra ny taranaka vaovaon'ny mpanoratra, nahazo aingam-panahy avy amin'i Alain Mabanckou mpanoratra sy manam-pahaizana nahazo loka aho. Ao Senegaly, voadonan'ny firongatry ny vehivavy mpanoratra ankehitriny aho, taorian'ny nivoahan'ny bokin'i Marie Ndiaye be mpamaky. Nanamarika aho fa ao Kamerona, manoratra amin'ny fomba mivantana sy ny hery mampalaza azy ireo ny mpanoratra. Tsy maintsy miaiky aho fa mankasitraka tanteraka ireo mpanoratra Nizeriana, tahaka an'i Chinua Achebe. Amin'ireo mpanoratra miteny frantsay, afaka milaza maro aho: Abdourahman A.Waberi avy ao Djibouti, Jimi Yuma avy ao Congo, Patrice Nganang sy Leonora Miano avy any Kamerona … ao anatin'ny lisitry ny rohy ao amin'ny bilaogiko avokoa izy rehetra ireo.
“Saisons sauvages (Vanin-taona tsy voafehy) “, Kettly Mars (Haiti)
Matetika mandresy amin'ny loka literatiora ny mpanoratra Afrikana, saingy tsy mba fantatra mihitsy ny ankamaroan'ireo sanganasa hitanao, tsy hita eny amin'ny fivarotam-boky Frantsay
- Manana olana amin'ny fahitana mpamoaka boky sy fahazoana mpamaky ny literatiora Afrikana amin'ny teny Frantsay. Saingy ao Afrika miteny Frantsay, sarotra havoaka ny boky, lafo vidy sy sarotra hita. Any an-kafa ny olana. Izahay, Afrikana Andrefana dia afaka manoratra sy mamoaka ny fomba fijerinay manokana, saingy mila mamaky ireny ihany koa izahay. Manana olana amin'ny famakiam-boky momba azy ireo ny Afrikana. Mikaroka tondro any an-kafa izy ireo. Manome fitantarana momba ireo mpanoratra ny bilaogiko, sy mampahafantatra azy ireo: mahazo fitsidihana an'arivony isam-bolana aho, avy ao Frantsa metropolitana ny 50%, ary Afrika Andrefana ny 30%.
- Indraindray ianao variana mandinika ny boky Japoney na Amerikana Atsimo ao amin'ny bilaoginao, fa tsy mijery ny Frantsay “fotsy” mihitsy.
“Le passé devant soi (ny lasa eo anoloana)”, Gilbert Gatore
Somary tia tena kokoa ny literatiora Frantsay. Tsy hijanona ela eto an-tany isika. Ataovy izay tokony atao. Ireo Frantsay fotsy mpanoratra dia mbola jamba tanteraka manoloana ny fanamby tena misy ao Frantsa, ny manjo ny tanora mainty hoditra na ny Arabo dia adino ao amin'ny faritry ny mahantra.
“Trois femmes puissantes (Vehivavy telo mahery)”, boky nahazo loka sy be mpividy indrindra tao Frantsa, nosoratan'ilay mpanoratra Frantsay-Senegaley Marie Ndiaye
Nahoana no nisafidy ity anarana ity “Chez Gangoueus” ho an'ny bilaoginao ianao,
Ngangoué no fanampin'anarako Kongoley faharoa. Manasokajy ny tenako amin'ny kolontsaina sy tontolo Afrikana sy Tandrefana aho, tiako ny manamarika izany ao amin'ny anarana fiantsoana ahy amin'ny fampidirana ny tovana us, manondro ny kolontsaina Latina, ny anarana tahaka ny hoe Brutus, Octavius na Britannicus. Maneho taratra ny famantarana roa ahy ny Gangouéus.
Maka sary ny boky vakianao foana ianao ary matetika, eny amin'ny fitateram-bahoaka
Satria eny no hamakiako ny boky! Rehefa asa dia asa, rehefa fianakaviana dia fianakaviana. Nanjary fotoana famakiam-boky ho ahy ny fotoana lany mandeha miasa
“Les phalènes”, Tchicaya U Tam'Si